राम्रो व्याकरणको महत्व र ब्लगि inमा विराम चिह्न Martech Zone
मलाई चिन्ने व्यक्तिहरू जान्दछन् कि म व्याकरण र विराम चिह्नको एक बिट हुन सक्छु। जहाँसम्म म मानिसहरूलाई सार्वजनिक रूपमा सुधार गर्न सक्दिन (म तिनीहरूलाई निजी रूपमा निवारण गर्छु), म संकेतहरू सम्पादन गर्न जान्छु जसमा गलत हिज्जे शब्दहरू, गलत ठाउँमा राखिएका एस्ट्रोस्फिसहरू, र सामान्यतया असामान्य त्रुटिहरू हुन्छन्।
त्यसोभए, भन्नु पर्दैन, म सँधै यकिन गर्ने प्रयास गर्छु कि मेरो लेखन व्याकरणीय स्फटमा छ।
हो, ब्लगमा पनि।
"तर ब्लग अनौपचारिक र कुराकानीको रूपमा लिइन्छ।"
तपाई जस्तो सोच्न सक्नुहुन्न त्यहाँ ब्लगिgingलाई अँगाल्ने अधिक व्यवसायहरू छन्, र तिनीहरू विश्वास र विश्वसनीयताको छवि प्रोजेक्ट गर्न कोशिस गर्दैछन्। र यसलाई विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, ग्राहकहरूले व्याकरणमा र यसको एक कम-स्तरीय पीआर फ्लनकीमा आफ्नो सबैभन्दा आधारभूत कोर मिशन गर्न पूर्ण निगमको क्षमताको न्याय गर्नेछ।
"हे भगवान, तपाईले एउटा सहभागी बनाउनु भयो! हामी अब तपाइँको उत्पादनहरू फेरि किन्न छैन! "
मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? राष्ट्रपति चुनावको समयमा कुनै पनि राजनीतिक ब्लगमा भएका टिप्पणीहरूमा ध्यान दिएर ध्यान दिनुहोस्।
जबकि तपाईंलाई ती प्रकारका व्यक्तिहरूलाई प्लेसकेट गर्न आवश्यक पर्दैन (तिनीहरूलाई सट्टामा देशद्रोह गर्नु आवश्यक छ), तपाईंले दक्षता र व्यावसायिकताको छवि प्रस्तुत गर्न आवश्यक पर्दैन। र यसको मतलब तपाईले शब्दहरू हिज्जे ठीकसँग गर्न आवश्यक छ, र उचित व्याकरण र विराम चिह्न प्रयोग गर्नुहोस्।
म कहिले काहिं डगमग डीएम लाई केहि गलत ठाउँमा राखिएको एस्ट्रोक्राफ वा उसको एउटा मार्केटिंग टेक्नोलोजी पोष्टमा गलत हिज्जे शब्दको बारेमा पठाउँछु (जुन हिन्डसाइट हुन सक्छ किन होला मलाई सजाय दिइयो मलाई यो लेख लेख्न भनियो)।
त्यहाँ धेरै छन् व्याकरणात्मक त्रुटिहरू, यदि तपाईं तिनीहरूलाई बनाउनुहुन्छ, खुलस्त तपाईंलाई मुर्ख देखिन्छ (Copyblogger का शब्दहरू, मेरो होइन)। यसको बनाम जस्तो चीजहरू र यो तपाई बनाम हो। तपाईका त्रुटिहरू हुन् जुन तपाईलाई गर्नु भन्दा राम्रोसँग जान्नुपर्दछ।
धेरै मानिसहरूले भन्नेछन् कि व्याकरण र ब्लगमा हिज्जे महत्वपूर्ण छैन। कि हामी अनौपचारिक हुनुपर्छ र फिर्ता राख्नु पर्छ, र त्यो मात्र केही फरक पर्दैन।
यो ठीक छ यदि तपाईं आफ्नो जीवनको बारेमा व्यक्तिगत ब्लग लेख्दै हुनुहुन्छ, र यो कि तपाईं केवल केहि साथीहरू पढ्न अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं चाहानुहुन्छ अनौपचारिक हुन सक्नुहुन्छ, तपाईंको मनको ईच्छामा त्रुटिहरू, र तपाईंको पोष्टहरू पनि भर्नुहोस् कृतज्ञ-अझै-प्रफुल्लित शपथ। (हेर्दै तपाईं, The BlogGss।)
तर यदि तपाईं आफ्नो व्यापार, तपाईंको कर्पोरेसन, वा तपाईंको उद्योगको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सकेसम्म सबै चीज सफा र त्रुटि मुक्त रहनु आवश्यक छ।
यदि तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भने यो पाप होईन। धेरै समय मैले मेरो ब्लग पोष्टहरूमा त्रुटिहरू गरेको छु, विशेष गरी जहाँ म राम्रो व्याकरण र विराम चिह्नको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्छु। तर म सँधै पछाडि जान र यसलाई सफा गर्न सक्छु। त्यो ब्लगि aboutको बारेमा ठूलो कुरा हो: केहि पनि स्थायी हुँदैन, पत्रिका वा ब्रोशर जस्तो। यो एक स्थिर, जीवित कागजात छ। घटना पोष्टहरू जुन तीन बर्ष पुरानो हो।
त्यसोभए यदि तपाइँले एउटा वा दुई त्रुटि गर्नुभयो भने निराश नहुनुहोस्। कसैलाई विश्वास गर्नुहोस् तिनीहरूलाई हेर्नुहोस् र ईमानदार प्रतिक्रिया दिनुहोस्। त्यसोभए पछाडि जानुहोस् र सम्पादनको दुई जोडी राउन्डहरूको समयमा तपाईंले छुटेका कुनै चीजलाई ठीक गर्नुहोस्।
किनभने सहि वा गलत रूपमा, nitpickers बाहिर छन्। र ती तपाइँको लागि आउँदैछन्।
मेरो गल्तीहरू फेला पार्नु भएकोमा तपाईंको आँखाको कत्ति कदर गर्छु म शब्दहरूमा राख्न सक्दिन! म चेतनाको धारामा लेख्ने झुकाव राख्छु र मेरा गल्तीहरूलाई मैले लेख्दा जत्तिकै सजिलै प्रमाणीकरण गर्दा हेर्छु। यो एक अलिकति श्राप छ। साथीहरूलाई धन्यवाद!
जब म धनी र प्रसिद्ध छु, म तपाईंलाई क्षतिपूर्ति गर्न जाँदैछु! 😀